Author Topic: Su'aal: Kaadi badan ayaan isku arkaa xilliga soonka? (Read 3271 times)
« on: May 31, 2018, 09:25:48 AM »
Asc Somalidoc Ilaah ha idin barakeeyo , waxaa rabaa su'aal inaa idin waydiiyo , maalma Soonka waxaa isku arkaa kaadi badan xitaa hadii aan koob barkiisa oo biya hadaa cabo waqtiga Suxuurta wax is badala ma arko kaadida sideeda tahey 5-7 jeer maalintaas as Ku noqdaa musqusha , halka habeenkii markaa afuro oo wax cuno biyo badana cabo waxaa musqusha galaa 3-4 jeer. Sidoo maalinta waxaa kaloon isku arkaa af qoyaan badan sida qof biyo cabay waxaa moodaa qanjirada afka iney soo daynaayaan waxaa dareemaa qabow aan saa'idna ahayn.
Su'aalaheega haday badanyahey ama isku qasanyiin aa Ku wareertaan fadlan ii dulqaata dadka ma ihi wax qoro ama Ku sheekeeyo qoraalka.
Re: Su'aal: Kaadi badan ayaan isku arkaa xilliga soonka?
« Reply #1 on: December 30, 2018, 11:51:10 PM »
Dadka qaar markay sooman yihiin waxaa kilyaha ku yaraado awoodda inay biyaha dib u soo nuugaan, waa arrin lagu ogaaday cilmibaaris ahaan marka hala yaabin inay kaadidaadu badato markaad gaajaysan tahay ama sooman tahay, halkaan ayaadne ka arki kartaa cilmibaaristaas iyadoo faahfaahsan: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11181414
Views: 21950 April 20, 2015, 12:29:25 PM
Views: 11892 October 19, 2016, 06:58:27 PM
Views: 17448 May 11, 2011, 04:28:24 PM
Views: 12108 May 19, 2011, 08:49:53 PM
Views: 68739 August 12, 2015, 01:45:58 PM